Ma la hayaa cid gu'gii meel ku sheegta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ma la hayaa cid gu'gii meel ku sheegta
La cusbooneeyay onsdag 10 april 2013 kl 11.26
La daabacay tisdag 9 april 2013 kl 19.13
Qabowgii oo fara kulul ku haya bulshada reer Isiidhen
Baahi ballaaran ayaa loo qabaa xilligii gu'ga oo uu dib u dhac ku yimid wakhtigii la sugayey. Waxaa haddaba suuqa ku dhex qaaday socod si uu bal wax uga soo ogaado halka uu gu'gii ka baxay weriye ka howl-gala idaacadda caalamiga ee raadiyaha Iswiidhen Kavoos Akhtari.
Weriye: maalin wanaag-san, maalin wanaag-san. Su'aal yar haddaan ku weeydiiyo, waxaan baadi-goob ugu jiraa gu'gii. Meel ma iigu sheegi kartaa halka aan ka heli karo gu'gii?
Inan: Muddo ayuu iminka naga maqan yahay. Welina ma arag xaqiiqdii. Waxaanse ka qaaday la'aantiisa hargab iyo wax la mid ah. Waxaan qabaa in la gaaray xilligiisii. Waa inuu yimaadaa.
- Jannicke Geitskaret- waxay ka howl-gashaa idaacadda la iska daawado ee Svt, laanteeda saadaalinta hawada.
- Gu'gii meelahaa ayuu ku dhuumaaleeysanayaa. Dadkeena ku howlan cimilada waxaannu leenahay hab aannu u qeexno gu'ga. Waxaa lagu gartaa goorta uu yimaada in muddo toddobaad ah inuu heer-kulka hawadu aanu ka hooseeyn eber C. Markaa kadib ayaa la xaqiijin karaa in gu'gii uu yimid, xitaa haddii hawadu qaboobaato toddobaadka dabadeed. Xilligii gu'ga ayuu sannadka dib-dhac ku yimid. Haddahaayaa waxaa la filayey inuu gaaro illaa iyo magaalada Sundsvall iyo gobolka Dallarna, hase yeeshee waxaannu weli soo gaarin magaalada Istockholm.
Weriye: Gu'gii meel ma ku sheegtay?
Nin: Maya, laakiin jaay un baa meelaha yaal. Mana ahan wax lagu farxo. Qaati ayaan ka joogaa qaboobaha. Waa wax iga yaabiyey inuu bani'aadam ku fekerey oo doortey inuu cimiladan deegaan ka dhigto.
Jannicke Geitskaret, hawa-saadaaliye: - Sannadku waa mid aad u qabow. Waxaana la oran karaa inuu aad u daba dheeraaday qaboobihii. Waxaa lala barbar-dhigi karaa mararkuu xilliga gu'gu u iman jiray sidii caadiga ahayd. Waxay ahayd inuu magaalada Istockholm soo gaaro ugu dambeeyn 20-kii bishii maarso ee la soo dhaafay. Bisha maarso ee sannadkan ayaa ahyd middii ugu qaboobayd muddo toddoba sannadood ah. Qboowga ayaa halkiisa ka soo socon doona in muddo ah, hase yeeshee la fileyaa in toddobaadka ina soo haya bartamihiisa ay hawadu xoogaa ka soo yara kululaato. Waxaa markaa dhici karta in goobo inta iminka ka badan uu xilliga gu'gu soo abbaaro., isla-markaa uu habeenkuna ay hawadu ka kululaato inta ay iminka tahay.
Weriye: Waxaan baadi-goob ugu jiraa gu'gii. Meel ku sheeg?
Man: Maya meel kuma ogi weli. Aniga qudheeyda ayaa u hiillooday, welise meel kuma arag. Hawada bannaanka oo wax qabow lagu cabo waa shaqadeeyda.
Weriye: Su'aasha haddaba is weeydiinta leh waxay tahay. Goorma ayuu gu'gii iman?
Jannicke Geitskaret: Waxaan aamin-sanahay inuu iman doono muddo laba toddobaad iminka ey ka har-san tahay, waayo waxay hawadu u muuqataa mid ka soo raynaysa. Laba toddobaad dabadeed.